स्वयं सहायता पुस्तकहरु। तिनीहरू वास्तवमै मद्दत गर्छन् वा तिनीहरू फियास्को हुन्? | वर्तमान साहित्य
स्वयं सहायता पुस्तकहरू। तिनीहरू वास्तवमै मद्दत गर्छन् वा तिनीहरू फियास्को हुन्?
अक्टुबर २० मा, अल्बर्ट एस्पिनोसाको सबैभन्दा नयाँ पुस्तक बिक्रीमा राखिएको थियो, रहस्य तिनीहरूले तपाईंलाई कहिले भनेनन्, जुन पहिले नै सबै भन्दा राम्रो विक्रेता बीच हो। तर त्यहाँ स्वयं सहायता, प्रेरणा वा बजारमा व्यक्तिगत ब्यक्तिको असंख्य शीर्षकहरू छन्। तिनीहरूले छिमेकको किताब पसल वा ठूला चेनहरूको कवचहरू छोप्दछन्। व्यापक प्रस्तुतिकरणहरू गरिन्छ, धेरै मिडिया नामहरूको साथ टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरू ... जे भए पनि, तिनीहरू हुन् र लामो समयदेखि फेसनमा छन। र तिनीहरू सफल हुन निश्चित छन्।
तर के त्यो सफलता योग्य छ? हो तिनीहरू सहयोगको लागि सल्लाह दिन्छन्, सिफारिस गर्दछन् वा केवल सुधारको अनुभव बताउँछन् जुन लेखकहरूले विश्वास गर्छन् अन्यलाई मद्दत गर्दछन्। र निस्सन्देह यो पूर्ण कानुनी हो कि तिनीहरूले यसको लागि लाभ लिन सक्दछन्। केवल समय - कुनै पनि लेखक को लागी - पहिले नै एक मूल्यवान छ। तर के यो साँच्चै यस्तै हो? के तिमीले कुनै पढेका छौ? के तपाई काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ? म स्वीकार गर्छु कि मैले कुनै पढेको छैन। हुनसक्छ मलाई उनीहरूको आवश्यक पर्दैन (अझै)। हेरौं ...
नेटवर्क प्रेरणादायक वाक्यांशहरूले भरिएको छ (बेनामी होईन वा होईन), इडेलिक ल्यान्डस्केप र निलो स्काइको पृष्ठभूमिको साथ सकरात्मक सन्देशहरू। हामी ती सबै पढीरहेका छौं, कहिलेकाँही अधिक चासोको साथ, कहिलेकाँही शंकाको साथ, विश्वास गर्न वा सरल जिज्ञासाको साथ। जो सार्वजनिक र सार्वजनिक मा किट्स से एलर्जी छ उनीहरु बहुमतको साथ पित्तीबाट ग्रस्त छन्, तर हामी यसको वास्तविकतालाई स्वीकार्छौं र किन गर्दैनन् - कि यसले अरूको लागि कार्य गर्न सक्दछ अन्य एक दिनको लागि प्रेरणा र म्याद सकिन्छ। त्यसोभए किन तिनीहरू पुस्तकको रूपमा काम गर्न सक्दैनन्?
मैले भर्खरै अल्बर्ट एस्पिनोसा भित्र देखें एन्थिल। मलाई पहिल्यै थाहा थियो उनीहरूको रातो ब्रेसलेटहरू वा उसको यदि तपाइँ मलाई भन्नुहोस्, आउनुहोस्, म सबै छोड्छु ... तर मलाई भन्नुहोस्, आउनुहोस्। र, सबैलाई जस्तै, मलाई उसको आत्म सुधारको कथा थाहा छ जुन कुनै श doubt्का बिना, एक सय प्रतिशत प्रशंसनीय छ।
म आफैं मैले एकता पुस्तकमा परोपकारितामा भाग लिएको छु जसमा फोटोग्राफी र साहित्य मिसाइएको छ विभिन्न rare० बच्चाहरूको of० कथाहरू बताउन विभिन्न दुर्लभ रोगहरू। तर एकता पुस्तक एक स्वयं-मद्दत पुस्तक होईन। यो केवल संघर्षको जीवनका ती घटनाहरू प्रचार गर्ने उद्देश्यले हो, र आर्थिक लाभहरू प्राय: कारणको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो पुस्तक यी बच्चाहरूको जीवन स्तर सुधार गर्न कोष जुटाउने बारेमा छ।
सेल्फ-मद्दत वा प्रेरणादायक पुस्तकहरूको सब भन्दा प्रत्यक्ष उद्देश्य हुन्छ। हामी सबै नराम्रो वा खरानी स्ट्र्याकहरू मार्फत गर्छौं, हामी सबै एक उत्तर, तर्क वा विचार खोज्छौं जब चीजहरू कुनै बिरूद्ध गलत हुन्छन्। र हामी सन्देश सुन्छौं जुन यी पुस्तकहरूले हामीलाई प्रदान गर्दछ: मलाई के भयो हेर्नुहोस् वा मलाई थाहा छ हेर्नुहोस् मैले के सिकेको छु, के ले मलाई मद्दत गरेको छ, के तपाईं आफैंमा लागू गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लागि यो काम गरेको छ। तपाईं प्रयास गर्नुहोस्। किन यो तपाइँको पनि काम गर्दैन?
यसैले मैले अन्य धेरै शीर्षकहरूमा पनि एक नजर लिएको छु, जस्तै राफेल सन्तन्द्रेउ, ती पुन्सेट (बुबा र छोरी) वा बुकायको बुपैले। वा त्यो अहिलेको शक्ति: आध्यात्मिक ज्ञानको लागि मार्गनिर्देशनजस मध्ये छैठौं संस्करण पहिले नै चलिरहेको छ। त्यो कति टाढा छ कसले मेरो चीज लिएको छ ?, Spencer Johnson द्वारा! तर पक्कै पनि ती शीर्षकहरूले एक झलक दिन्छ.
राफेल सान्तान्द्रेउ र लुइस रोजास मार्कोस
Y मैले साथीहरू र परिचितहरू बीच एउटा सर्वेक्षण गरें। केहि, आफ्नो जीवनको कठिन जीवनको वारको साथ वा उनीहरूसँग धेरै नजिकको, भावनात्मक आँधीबेहरीलाई मौसमका लागि यस्तै पढाइको साथ पत्ता लगाउन सक्षम भएका छन्। केहि उत्तरहरू ती प्रेरणा र प्रोत्साहनका धेरै शब्दहरूको बीचमा मार्गदर्शन गर्नका लागि लेखकलाई उसको तयारी वा व्यावसायिक ज्ञानका लागि महत्त्व दिन रुचाएका छन्। तसर्थ, यो मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठाका मनोवैज्ञानिक वा मनोचिकित्सक हो जसले प्राय: विश्वसनीयताको हत्केला लिन्छन्। उदाहरण लुइस रोजास मार्कोस वा माथि उल्लिखित सान्तान्द्रेउ हुन सक्छ। वास्तवमा, उनका पुस्तकहरू सबैभन्दा मूल्यवान र बिक्रि भएका हुन्।
यद्यपि, हुनसक्छ उनीहरूले उज्यालो गर्न सक्ने प्रकाश त्यति शक्तिशाली वा यथार्थ छैन। र जब यो साँचो भावनात्मक पुनःस्थापनाको कुरा आउँछ, तपाइँ पेशेवरमा जानुपर्दछ जो प्रिन्टमा उत्कृष्ट, सबैभन्दा प्रेरणादायक र सबैभन्दा प्रेरणादायक शब्दहरू भन्दा पनि वास्तविक छ। हो वा होइन? के हामी यी पुस्तकहरू मार्फत त्यो उज्यालो देख्न सक्छौं जब हामी कालोपनको स in्कटमा छौं? म यो त्यहाँ छोड्छु.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » स्वयं सहायता पुस्तकहरू। तिनीहरू वास्तवमै मद्दत गर्छन् वा तिनीहरू फियास्को हुन्?
र म अझै यो पुस्तक सम्झन्छु: शुभकामना छ कि यसले प्रकाशन कम्पनी EMPRESA ACTIVA मा लेखक द्वारा प्रकाशित गरेको धेरै बेचिन्थ्यो: एलेक्स रोभिरा र Fdi Trias de Bes
रिचर्डोलाई जवाफ दिनुहोस्
NM Parga भन्यो
नमस्कार मारियोला, मैले धेरै स्वयं-सहायता पुस्तकहरू पढेको छु र आध्यात्मिकतासँग सम्बन्धित छ। प्रत्येक पुस्तकले मलाई मानसिक उपकरणहरू र / वा खास समस्या देखी वास्तविकता हेर्ने नयाँ तरिका दिएका छन। पुस्तकले कसैको जीवनलाई परिवर्तन गर्दैन, जबसम्म कि त्यस व्यक्तिको आफ्नो वास्तविकता बुझ्ने तरिका बदल्ने निर्णय हुँदैन, आंशिक रूपमा पुस्तकमा साझेदारी गरिएको ज्ञानलाई लागू गर्दछ। तर म निश्चित छु कि अन्य व्यक्तिहरू यस प्रकारका पुस्तकहरू उनीहरूको कुनै काम लाग्दैनन्। जब तपाइँसँग धेरै गम्भीर समस्याहरू छन् तपाईले स्वास्थ्य पेशेवरहरू, विशेषज्ञ वकिलहरू, आदितर्फ फर्कनु पर्छ।
NM Parga लाई जवाफ दिनुहोस्
हामी सहमत छौं। तपाईको टिप्पणीका लागि धेरै धन्यबाद।
जति पढाईले हामीलाई हाम्रो जीवनको धेरै पक्षहरूमा मद्दत गर्दछ, केहि पनि छैन र जब म केही पनि केही पनि होइन भने, यसले हामीलाई मद्दत गर्न सक्छ यदि व्यक्तिले एक्लै एक्लै आफ्ना समस्याहरूको समाधान देख्दैन भने।
मनोवैज्ञानिकहरू, पति / पत्नी वा साथीहरूले हामीसँग कुरा गर्न सक्दछन्। तपाईंले आफ्नो सुरुnel छोड्नु पर्ने निर्णय नगरेसम्म तपाईंले कहिले अन्त्यको प्रकाश देख्नुहुने छैन।
यी स्व-मद्दत पुस्तकहरू केवल तब सम्म उपयोगी हुन्छ जब तपाईंले यो महसुस गर्नुहुन्छ कि तपाईंसँग समस्या छ र तपाईं यसलाई समाधान गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ।
बाँकी शब्दहरू र "क्यासियरहरू" हुन्।
यो जोर भन्न सकिन्छ तर स्पष्ट होइन, इसाबेल। टिप्पणीका लागि धन्यबाद।
धेरै राम्रो बहस मारियोला, मलाई लाग्छ कि एक सेल्फ-मद्दत पुस्तकले तपाईंको दिमाग खाली गर्न सक्छ वा बलियो गर्न सक्छ यदि तपाईं आफैंको बारेमा केही अनिश्चितताहरू छन्, तर जब समस्या केही गम्भीर हुन्छ, पेशेवरहरू ती हुन् जसले तपाईंलाई खोजीमा मार्गदर्शन गर्नका लागि गणना गर्छन्। प्रकाश र शान्ति।
यद्यपि मैले सान्तेन्द्रूको जस्तो पढेको छु, विशेषगरि उसको खुशीको चश्मा, र उनीहरूले ध्यानमा राख्न सकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्छन्।
यस जीवनका सबै चीजहरू जस्तै उनीहरूलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिहरूलाई स्वागत छ।
एलेक्स मार्टिनेज भन्यो
म व्यक्तिगत रूपमा cataloged स्वयं सहायता पुस्तकहरु मा विश्वास गर्दिन। मलाई लाग्छ कि धेरै अवसरहरूमा तिनीहरूले परिस्थितिलाई अत्यन्तै व्यक्तिपरक दृष्टिकोणबाट व्यवहार गर्दछन् र ती सबैलाई हामी मूल्या the्कन नगरीकन व्यवहार गर्दछौं। जे भए पनि, पक्कै पनि म साच्चै कृतज्ञ छु कि धेरै मानिसहरूले यसलाई सुधारको लागि प्रयोग गर्दछन् जुन पक्षले उनीहरूको सर्तमा सुधार गर्नका लागि अग्रसर गर्दछन् र यदि उनीहरूले यो लक्ष्य हासिल गरे भने स्वागत छ।
एलेक्स मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
तपाइँको टिप्पणी को लागी धन्यवाद, एलेक्स। छोटकरीमा, यो एक बहस हो जुन आफैंले धेरै दिन्छ।
स्व-मद्दत पुस्तकहरूले मलाई व्यावसायिक मनोवैज्ञानिकहरू, इ
मैले "गुप्त" पुस्तक पढेकोले मलाई लाग्छ कि म बिरामी परेको छु, अनौंठो स्वादले मलाई केही शीर्षकहरू पढ्दा दिन्छ, किनकि यो भन्दा २ बर्ष भन्दा पहिले मलाई मन्फ्रेड लट्ज र म द्वारा 'अनिवार्य रूपमा खुशी' भन्ने किताब दिइयो। धेरै विश्वसनीय सिफारिशहरूको बाबजुद पनि यसलाई हेरेन
"ईगलको छाया", पेरेज-रिभर्टे द्वारा बिर्सिएको क्लासिक
ग्याster्ग्स्टर, सहयोगी, आपराधिक, भगुवा र लेखक।